Fanamboarana ny kianja Barea :: Vita 90% ny fototry ny « gradins » etsy Mahamasina • AoRaha
Miditra amin’ny fananganana ny fototra ambony ho an’ny toeran’ny mpijery na ny «gradins» vaovao ny asa ao amin’ny kianja Barea, etsy Mahamasina, amin’izao fotoana izao. Fantatra fa ny sivifolo isan-jaton’ny asa fanamboarana ny fototra (midina telopolo metatra ambanin’ny tany) miisa roa amby fitopolo amby zato no efa tontosa.
Mandroso miaraka amin’izay ny fitarihandrano. Navily lalana ao anatin’ny asa mandeha ankehitriny izany ka lasa mizara manodidina ny kianja, raha namakivaky tao ambanin’ny kianja filalaovana ny fantsona lehibe mitondra ny rano avy any amin’ny faritra ambonin’i Mahamasina (Andohalo, Tsimialonjafy) mankany Anosy.
Kendrena ho azo ampiasaina alohan’ny 14 oktobra 2020 kosa ny « tribune », rehefa nisedra fahatarana fanavaozana azy noho ny Covid-19. Manodidina ny fitopolo isan-jaton’ny rafitry ny « tribune » ivelany no vita. Eo amin’ny rihana fahatelo, amin’ny rihana efatra ny fanamboarana, ankehitriny. Efa voarafitra manaraka ny fenitra ny fantsona ho an’ny jiro sy ny rano, ho an’ny ao anatiny. Voaomana ihany koa ireo efitrefitra samihafa, toy ny birao sy toeram-panomanana isankarazany, ny toeram-pivoahana ary ny tohatra. Mandritra ny fotoanan’ny orana no hamitana ny pitsopitsony anatiny rehetra.
Anisan’ny fepetra takian’ ny FIFA amin’ny fanamboarana kianja manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fiarovana ny mpijery. Hisorohana ny fifanosehana miteraka faharatrana sy ny fahafatesana olona amina lalao na fotoana lehibe no tanjona. « Hisy tohatra fidirana lehibe roa hatsangana amin’ny sisin’ny « tribune » ka hitondra avy hatrany ny mpijery ao amin’ny rihana voalohany. Mirefy 726m avy ireo ary mahazaka olona 2 904, miara-miditra na miara-mivoaka », hoy Andriamanohisoa Gérard, mpikambana ao anatin’ny komity misahana ny asa fanavaozana ny kianja.
Eo am-pifantenana ny orinasa hanatanteraka ny fanavaozana ny kianja filalaovana kosa, ny orinasa sinoa CSCOD, izay miandraikitra ny fanamboarana ny Kianja Barea. Bozaka voajanahary no hatao hilalaovana eo Mahamasina, saingy misy fomba fanondrahana avy any ambanin’ny tany. Vinavinaina amin’ny volana desambra ho avy izao ny fametrahana ireo fantsona fanondrahana any ambanin’ ny tany. Aorian’ny fotoampahavaratra manaraka eo kosa no hanomboka hampitsiry ny bozaka.
Kitra – Lalao ara-pirahalahiana :: Mpilalaon’ny Barea dimy tany Ejipta tsy ho any Portigaly